Palitao / Volomaso → Akanjo fanaovana doka • amboradara solosaina P&M matihanina
Palitao sy akanjo azo antoka fa safidy tsara amin'ny fararano sy ririnina. Ny akanjo atolotray dia toa tena tsara, nefa koa misy singa ilaina amin'ny fampiasana. Izy io dia mahomby amin'ny fiarovana amin'ny anton-javatra ivelany toy ny rivotra sy ny orana.
Palitao sy palitao tsy misy orana ary ririnina
Mendrika fiheverana betsaka ny fanapahana rainproof ary windproof, noho ny fampiasan'izy ireo amin'ny toetry ny andro any ivelany sarotra. Vokarina palitao sy akanjo ny haitao maoderina indrindra no ampiasaina, izany rehetra izany dia hanompo mandritra ny taona maro amin'ny vokatra tsara indrindra ny vokatra ary mitazona ny fananany.
Fomba isan-karazany amin'ny fampiononana sy fiarovana
Ao amintsika fivarotana ho hitanao palitao ary kamizelki amin'ny fomba isan-karazany ho an'ny vehivavy, lehilahy, ankizy ary unisex. Ny habe sy ny loko isan-karazany dia ahafahanao manitsy ny vokatra arak'izay ilainao ary mamantatra azy ireo amin'ny loko miaraka amin'ny lokon'ny orinasa na ny klioba.
Safidy ilaina indrindra io rehefa manafatra akanjo fanaovana dokam-barotraindrindra raha safidintsika izy personalization amin'ny famonoana pirinty tsirairay.
Izy ireo dia mahaforona vondrona manan-danja palitao taratra, fanatsarana ny fiarovana eny an-tsaha sy eny an-dalana. Izy ireo dia mety amin'ny fitsangatsanganana aorian'ny maizina, ary koa amin'ny andro feno rahona.
Ny tolotra dia misy koa ny palitao mavo sy taratry ny taratry ny zaza, izay hanatsara ny fahitana sy ny fiarovana ny zaza eny an-dalana na eny amoron-dalana eny anelanelan'ny trano sy ny sekoly. Ny palitao mieritreritra ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy dia hanampy amin'ny fampihenana ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny fahitana ny fahitana.
Isika manolotra ihany koa palitao taratra miaraka amin'ny mety hisintahana ny tanany sy ny hood, izay ilaina indrindra amin'ny vanim-potoana tetezamita ary na aiza na aiza ny asa dia mitaky fanovana ny tontolo iainana sy ny mari-pana. Ny palitao dia manana palitao volon'ondry azo esorina, misy taratra taratra 3M voamarina, mahafeno ny fenitra EN ISO. Ny vokatra dia azo alefa manokana, na izany aza, noho ny zaitra sy paosy marobe, voafetra ny faritry ny fanamarihana, ny fidirana amin'ny marika dia eo aorina.
Pirinty natao estetika
Haingo (amboradain'ny solosaina na fanonta-efijery) amin'ny palitao sy palitao dia natao tamin'ny fijerena ny antsipiriany rehetra.
Ny fifantohana amin'ny kalitao avo lenta dia midika fa ny akanjo novidinao dia ho singa solontenan'ny orinasa. Ny orinasanay dia manana zaridaina manokana, izay ahafahantsika mifehy tsara ny fizotry ny haingon-trano isaky ny dingana, ary amin'izany dia mihetsika avy hatrany raha sendra lesoka famokarana.
Rehefa nanitatra ny tolotra vokatra sy ny filan'ny mpanjifa dia nanapa-kevitra ny hanao haingon-trano amin'ny fomba isan-karazany izahay amboradain'ny solosainafa koa fanonta-efijery, sublimation i famindrana hafanana.
Manasa anao izahay amin'ny fanombanana haingana sy maimaimpoana.
palitao asa mafanapalitao fiasan'ny vehivavyakanjo ho an'ny lehilahypalitao vita amin'ny insulated an'ny lehilahyakanjo vita amin'ny voaroypalitao vita amin'ny insulated an'ny lehilahypalitao asa taratrapalitao asaasa fitoriana Allegropalitao asa fahavaratraakanjo vita amin'ny voaroypalitao asa taratrawork vests olxakanjo vita amin'ny pirintyakanjo ririninapalitao fiasana ho an'ny lehilahypalitao miasa ririninapalitao asa voaravakapalitao miasa taratrapalitao asa fitaratra Allegropalitao ranonorana lehilahypalitao miasapalitao asaPalitao miasa Allegropalitao asa fotsypalitao asa vehivavymiampy palitao asa lehibepalitao fiasana ho an'ny lehilahypalitao asa ririninapalitao asa tsy mirehitrapalitao asa voaravakapalitao miasa taratraPalitao miasa ririninapalitao asa olxpalitao asa tsy misy oranapalitao asa thermoactivepalitao asa lohataonapalitao asa misy pirintypalitao asa misy taratrapalitao asa ririninaAkanjo fiasana ririnina Allegropalitao asa ririnina vehivavyPalitao miasa ririninapalitao asa ririnina Allegropalitao asa ririninafivarotana palitao asa ririninapalitao ririnina lehilahyPalitao ririnina miasa mitaratramiasa palitao ririninapalitao ririninapalitao miasa malalakapalitao asa marikapalitao miasa mascotpalitao asa norwaypalitao miasa taratrapalitao asapalitao asa voaravakamiasa palitao ririninaakanjo akanjopalitao asa ririnina
5 / 5 ( 13 vato )